News - Cavities: Gịnị bụ ha na kedu ka anyị si egbochi ha?
Site n'aka Caitlin Rosemann
AT Still University - Missouri School of Dentistry na Ahụike Oral
You maara ezé ezé bụ ihe kacha sie ike na ahụ mmadụ? Enamel bụ akwa mkpuchi nke ezé anyị. Nje bacteria dị anyị n'ọnụ na-eji shuga anyị na-eri eme acids nke nwere ike iyipụ akwa nchekwa a, na-akpụ oghere. Ozugbo enamel gafere, ọ naghị etolite ọzọ. Nke a bụ ihe mere dọkịta gị na eze na eze na-agwa gị mgbe niile ka ị na-ete ikikere ezé dị ọcha ma hichaa ezé gị! Nwere ike ịmụtakwu banyere cavities na otu esi egbochi ha n'okpuru.
Gịnị Bụ Ogbe?
Otu oghere bụ oghere n’ọnụ gị. Oghere dị n'oge mmalite nwere ike ịdị ka ntụpọ ọcha, nke a ga-agwọ. N'ime oge, ọ ga-adị ka agba aja aja ma ọ bụ oji. Cavities nwere ike pere pere mpe ma ọ bụ buru ibu. Oghere nwere ike ịmalite n'ọtụtụ ebe, mana ha na-etolite n'elu ezé gị ebe ị na-ata aru na n'etiti ezé gị ebe nri na-arapara. Oghere ndị a na-edozighị edozi nwere ike ime ka uche dị na ya, na-egbu mgbu, na-efe efe, ọbụnakwa na-eme ka ị na-ata ikikere ezé. Zọ kachasị mma iji chebe ezé gị ma mee ka ha nwee ahụike bụ igbochi oghere.
Gịnị Na-akpata Okpu?
Ezé gị ọ̀ na-adị “ujo” mgbe ha risịrị nri? You na-achọpụta mgbe ị na-ehicha ma na-ehichapụ mmetụta a na-adịghị mma? Mgbe anyị na-adịghị ehicha ma na-ata nje na nri anyị na-eri na-ewulite ma na-etolite ihe nnyapade akpọrọ plaque (plak).
Kwa ụbọchị, nje na-eri nri anyị na-eri. Mgbe anyị na-eri ma ọ bụ na-a drinkụ shuga, nje ndị dị n'ọnụ anyị na-eji ya eme ihe ma na-eme acid. Acid a na-anogide n’ ezé ma wakpo elu ezé anyị. N'ime oge, acid ahụ na-ekpuchi ezé anyị, na-eme ka oghere dị.
Iji ghọta ka oghere si adị, ka anyị leba anya n’ihe mere ezé. Enamel bụ mkpuchi siri ike n’èzí na-echebe ezé anyị. N'okpuru enamel bụ dentin. Dentin esighi ike dika enamel. Nke a na-eme ka ọ dị mfe maka oghere ndị na-agbasa ma na-ebuwanye ibu. N'okpuru ebe dentin ahụ bụ pulp. Mkpụrụ osisi pulp bụ ebe irighiri akwara na ọbara ezé dị.
Ọ bụrụ na edozighị oghere, nje ndị ahụ nwere ike isi na enamel gaa dentin wee rute pulp. Ọ bụrụ na nje ndị sitere n’olulu ahụ banye n’akpa ahụ, ọ na-ebute ọrịa.
Ọrịa eze nwere ike ịdị njọ ma na-eyi ndụ egwu ma ọ bụrụ na agwọghị ya. Lee dọkịta ezé gị ozugbo ma ị chọpụta nke n'ime ihe ndị a:
• Ọza na ihu gị ma ọ bụ n'ọnụ gị
• Na-acha uhie uhie n’ime ma ọ bụ gburugburu ọnụ gị
• Mgbu n'ọnụ gị
• tastetọ na-adịghị mma n'ọnụ gị
Isnye Nọ n’ihe ize ndụ maka oghere?
Childrenmụaka, ndị ntorobịa, na ndị toro eto nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ maka ịnweta oghere. Inwere ike ịnọ n’ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na:
• Nri n'etiti nri
• Rie nri na ihe ọaryụ drinksụ na-atọ ụtọ
• Nwee onwe gị na / ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ nke oghere
• Nwere ezé gbajiri agbaji
• Were ọgwụ na-eme ka ọnụ kọọ
• hadnwee ọgwụgwọ radieshon n'isi ma ọ bụ n'olu
Olee Otú E Si Emeso Okpu?
Ekwesiri ịgwọta oghere ndị dọkịta metụtara. A na-azụ dọkịta ezé ka ọ hụ oghere. Enwere ike iji fluoride rụzie oghere dị na mbido. Ọ bụrụ na oghere ahụ dị omimi, naanị ihe ndozi nwere ike ịbụ maka dọkịta ezé iji wepụ oghere ma jupụta ebe ahụ na ihe ọla ọcha ma ọ bụ ọcha. Ọ bụrụ na eze nwere nnukwu oghere, ọ nwere ike ịchọ ọgwụgwọ dị mgbagwoju anya.
Kedu ka m ga-esi belata ihe egwu m nke oghere?
• waterụọ mmiri na fluoride
• Jiri ahịhịa ezé na-ete aka dị ọcha ugboro abụọ n’ụbọchị
• Zere nri na ihe ọ drinksụ drinksụ na-atọ ụtọ, dị ka swiit na soda. Erila nri ma ọ bụ rie ha ụbọchị niile. Ọ bụrụ na ị ga-eri ma ọ bụ drinkụọ ihe dị ụtọ, mee ya n’oge nri.
• Gbalata nri dị ụtọ n’etiti nri
• Hichaa n’etiti ezé gị kwa ụbọchị
• Gaa na dọkịta ezé gị mgbe niile
• A ga-etinye ihe mkpuchi azụ na ezé azụ iji chebe ha nke ọma site na nje bacteria na-ebute oghere na grooves.